Mibvunzo - FAQ - Jesson Mureza Arts & Crafts Co., Ltd.
Iwe uchazoburitsa chero ruzivo rwevatengi kune chero mapato ekunze?
Hazvina kumboitika. Isu tinonzwisisa kukosha kweruzivo rwebhizinesi kune mumwe nemumwe mutengi. Chero logo, zvinyorwa kana zvimwe zvakavanzika zvakavanzika. Isu tinoshanda zvese zviri pamutemo uye mutsika.
Ndeapi maawa ako eCustomer Service?
Vashandi vedu vekutsigira anowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki. Ivo vanogona kusvikwa ne skype kana email.
Ini ndinogona kuisa odha yangu pamhepo chero nguva?
Ehe, online maodha anogona kuiswa maawa makumi maviri nemana pazuva.
Ini ndinogona kudzosa zvigadzirwa zvandakaraira mushure mekunge ndazvigamuchira?
China-Mureza-Vagadziri haigone kugamuchira kudzoka pane yakadhindwa giraidhi nekuda kwetsika yadzo.
Kana iwe usina kugutsikana nekutenga kwako, ndapota nyorera vatengi vedu reps mukati memazuva manomwe ekugashira yako, uye nekuziva kwedu, tichagadzirisa zvako.
Kana iwe ukaona paine zvidiki kana zvinokwanisika smudges mune yakadhindwa giraidhi kana yekumonera matambudziko anogona kukanganisa kuratidzwa, China-Mureza-Makers vangada kukupa iwe 20% kubvisa dhisikaundi yeiyi odha, iyo inogona kuregererwa kune yako inotevera odha, hapana mashoma ekushandisa chikumbaridzo.
Ndeapi mafaira emafaira anogamuchirwa neChina-Mureza-Vagadziri?
AI uye PDF mafomati maviri anowanzo shandiswa kudhinda mufekitori yedu. Uye mamwe mafomati emafaira anogamuchirwa, asi chiyero chemufananidzo chinofanirwa kuve 1: 1 yemamwe mafomati.
Unogona here kuona kuti ruvara rwekudhinda rwakafanana nemifananidzo yangu?
Ese maRGB mafaera anozoshandurwa kuita CMYK kana yadhindwa. Shanduko iyi inogona kutungamira mukushomeka kwemavara, ayo anova nemhedzisiro pane yekupedzisira kudhinda mhedzisiro. Kuti udzikise musiyano wemavara, isu tichaongorora yako yemavara kara neyakajairwa Pantone C kadhi, saka ndokumbira utaure yako Pantone ruvara kana uchipa yako mifananidzo.
Ini ndoda rumwe rubatsiro kuti ndigadzirire yangu yefaira faira. Iwe une Artwork Rondedzero yekutarisa?
Ehe, tinya Artwork Magadzirirwo emamwe graphic maratidziro. Kana uchida rubatsiro rwakawedzerwa, unogona kubata vamiriri vevashandi vedu.
Ini ndinokumbira sei Artwork Dhizaini sevhisi?
Kuti ushandise yedu yeArtwork Dhizaini sevhisi, kutanga, sarudza chigadzirwa chaunoda kutenga. Mune Chigadzirwa Peji, tinya Artwork Dhizaini. Uye wozosarudza imwe yemhando yebasa rekuita zvinoenderana nezvaunoda.
Order & Kutumira Rubatsiro
Ndeipi nzira yekutumira yaunoshandisa?
Isu tinopa yakavimbika uye nehunyanzvi sevhisi yekutakura kuitira kuti odhiyo isvike kwauri nekukurumidza uye zvakachengeteka. FedEx neUPS zvinowanzo shandiswa pakutumira odha yako, uye kana uchida kutumira nedzimwe nzira dzekutumira, ndapota nyorera nevamiriri vedu kuitira vatengi.
Ini ndinogona kugadzirisa iyo Yekutumira Kero?
Hongu, unogona kugadzirisa kutumira kwako kana kushandura kero zuva risati raitwa hurongwa hwekutumira. Ndokumbirawo utibate isu nekukasira uye Mutengi weVatengi veSevhisi anobatsira nekusimbisa shanduko iyi.
Chii chandinoita kana ndikatadza kuwana zvimwe zvinhu mupakeji?
kutanga, tarisa kuti odha yakatumirwa uye iunzwe zvizere. Yako odha inogona kutumirwa mumabhokisi mazhinji, saka ita shuwa kuti mapakeji ese aunzwa. Kana ese mabhokisi akagamuchirwa, ongorora pasuru yekurongedza nokungwarira uye ongorora zviri mukati memapakeji ako. Taura nesu kana yako odha yakaunzwa nezvinhu zvisipo kana zvikamu.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ndiwane odha yangu?
Kazhinji, isu tinopa 1-zuva, 2-zuva, 3-zuva uye mashanu-mazuva ekutungamira nguva (* mushure mekubvumidzwa nemifananidzo) kune edu ese zvigadzirwa zvigadzirwa, uyezve 2-5 mazuva ebhizinesi ekutakura zvinoenderana nesarudzo dzako. Kuti uwane rumwe ruzivo rwekutakura, ndapota tarisa kune Shipping & Dhirivhari
Ko kana pasuru yangu ichiongororwa netsika?
Kuongorora kwetsika kunowanzo kungoita ongororo. Kana zvinhu zvacho zvichibatanidzwa mukopiraiti yekambani, zvakakosha kuti iwe upe zita rekuti Tsamba Yemvumo uye izvo zvinhu zvinofanirwa kuongororwa netsika. Kana paine musiyano pakati petsika dhata uye iyo chaiyo nhamba yezvinhu, iwe unofanirwa kupa ruzivo kana kunyora mushumo.